Semalt: Free Web Scraping Software KwaNewbies uye Real Pros
Kusiyana nemuiti wepurogiramu, munhu asina kukwanisa haagoni kunyora nheyo uye asina unyanzvi hwehutano. Uyezve, iye / haana simba mumasvomhu uye anogara achitarisa nzira dziri nyore dzekuchera kana kubvisa deta, kuita zvaanoita paIndaneti mabasa. Kana iwe usina murairi anotarisana nemabasa akawanda, unogona kuedza izvi software kana zvikumbiro zvekutsvaga mawebsite.
Scraper ine simba reGoogle Chrome rinowedzera. Icho chinhu chiri nyore asi chinoshamisa chekuchera mapeji ega kana akawanda uye kushandura dhesi rakabudiswa mumashiripiti - best cctv camera systems. Iwe unogona kushandisa purogiramu iyi apo iwe une Chrome iwe wekutanga web browser.
Scraper ichakurumidza kuverenga mapeji ako ewebhu uye kubvisa deta maererano nezvamunoda. Izvo hazvipi zvinokwana zvisarudzo zvisingaverengeki asi zvine user-friendly interface.
Twitter uye Facebook APIs
Kushandisa Facebook ne Twitter APIs, zviri nyore kwauri kuti ubvise demo kubva kunhamba zhinji dzewebhu. Iwe unogona zvakare kuongorora nzvimbo dzepikisano dzako uye kuongorora mazwi avo. API ndiyo inoshandiswa iyo inobvumira makumi matatu ezvematongerwoti zvishandiso kuti dzisvike nehutano hwemagariro evanhu. IA APIs yeZvino Facebook ne Twitter inogona kusanganiswa nenzira dzakasiyana-siyana; iwe unogona kuunganidza, kuongorora uye kubvisa ruzivo kubva kune dzakawanda zvehuwandu hwemashoko ehupfumi sezvaunoda.
Iyo ine simba uye imwe yepamusoro web scraping uye mapurogiramu emigodhi. Tumira. Io ndiyo nhamba yekuzvisarudzira imwe yevasiri mapurogiramu uye web developers application. Iwe unogona kushandisa chigadziro ichi kuti utore data kubva kuIndaneti dzakasiyana uye ugadzire ma API ako maererano nezvamunoda. Nekutumira. Io, iwe unogona zvechokwadi kuwana zvaunoda mumasekondi mashomanana. Iyi purogiramu inokubvumira kusarudza data uye kutsanangura mapeji ewebhu kuburikidza nehomwe-uye-click bhatani. Ichaongorora nzvimbo dzakasiyana-siyana dzewebsite kuti uwane dhenda yakarurama inofanira kubviswa.
Kimono Labs ndiyo chete yerurimi urwu runouya mushure mekushandurwa uye kushandiswa. Kana iwe usati uri purogiramu, iwe unofanira kusarudza shanduro yaro isingabhadhari uye haufaniri kushandisa mari yakawandisa pamapurojekiti ekudhonza deta. Uye kana iwe uri mugadziri wepurogiramu kana unyanzvi, iwe unorayirwa kushandisa shanduro yako yakabhadhara iyo inokubhadhara chimwe chinhu kubva pa $ 20 kusvika ku $ 30 zvichienderana nezvaunoda uye chirongwa chaunosarudza.
Tsvakurudzo idzi dzekutsvaga webhutano dzakakodzera kune vadzidzisi. Izvo zviri nyore-kushandiswa uye kuuya nekutsigira online. Zvakare, zvose izvi zvinoshandiswa pakutsvaga zvinyorwa kubva kune zvese zvemasimboti uye mberi uye mabloggi, pasina kushaya nguva nenguva. Pakupedzisira asi kwete, zvinyorwa izvi zvinogona kuchinja deta yako uye kubvisa mapepa ekuperesa zviri nyore.